Ungawenza Kanjani Ama-GIF Wama-animated Ngezinyathelo Ezilula ezi-3 - uLucidPix
Ukudala i-GIF yakho ye-animated kusuka ekuqaleni akudingeki ukuthi kube nzima noma kudle isikhathi. Ngokulandela lezi zinyathelo ezintathu ezilula, uzobe uzenzela owakho ama-GIFs kusuka ezithombeni zakho ngokushesha!
Izibonelo ezilandelayo zisebenzisa iLucidPix ukudala i-GIF yakho. Landa uhlelo lokusebenza mahhala ukuze uqale.
Isinyathelo 1: Khetha isithombe sakho
Vula i-LucidPix bese uthinta isithonjana sekhamera . Skrolela ngokusebenzisa i-roll yakho yekhamera futhi thepha ukuze ukhethe isithombe ongathanda ukusiguqula sibe isithombe eshukumisayo.
Uma ungathanda amanye amathiphu wokuthi yiziphi izithombe ezibukeka kahle njenge-GIFs animated, nokuthi ungazisebenzisa kanjani izici ezithuthukile zikaLucidPix, ngicela ubheke le ndatshana.
Isinyathelo 2: Guqula ku-3D ukwenza i-GIF animated
Ukuze ungeze ukunyakaza kusithombe sakho esisaqhubeka, sizosiguqula ukuze sikhombise zonke izici ezintathu. Lokhu kukuvumela ukuthi "ubone nxazonke" uhlangothi lwesithombe, njengoba nje ubungeke wenze empilweni yangempela uma unyakazisa uhlangothi lwakho.
Ukuguqulwa kwe-3D kulula, nje thepha inkinobho yokukhiqiza i-3D Photo . Ngemuva kwemizuzwana embalwa yokucubungula, okuthuthukile ukuhlakanipha okungekhona okwangempela yakhelwe ku-LucidPix izoguqula isithombe sakho esisicaba, esisalokhu sibe yisithombe eshukumisayo esifana nesimpilo.
Isinyathelo 3: Gcina isithombe sakho njenge-GIF egqwayizayo
Lapha kufika ingxenye emnandi! Ngaphansi kokwabelana endaweni, thepha i-3D GIF kanye nenketho yesitayela sokuhamba nesivinini ebukeka ihamba phambili. Ukugcina isithombe esishukumisayo kwikhroli yekhamera yefoni yakho, thinta Gcina i-GIF .
Manje ungabelana ngesithombe sakho se-GIF sangemuva nabangane nomndeni nge-imeyili, umbhalo, noma imidiya yomphakathi. Ukuthola eminye imininingwane ngenqubo yokudala ye-GIF, zizwe ukhululekile ukufunda i-athikili yethu Ungayakha Kanjani i-GIF Nge-LucidPix.